MINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY PLANINA: Ho foana ny hanoanana amin’ny 2030. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY PLANINA: Ho foana ny hanoanana amin’ny 2030.
MINISTERAN’NY TOEKARENA SY NY PLANINA: Ho foana ny hanoanana amin’ny 2030.
By Nirinajuil 12, 2017, 07:41 0
Tanjona faharoa ao anatin’ ny politikan’ny fampandrosoana maharitra na ODD, ho tratrarina amin’ny taona 2030, ny fanafoanana ny hanoanana. Zon’olombelona ny misakafo ara-dalana sy ara-pahasalamana. Manoloana izany, ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo no paika ady entina hanatrarana io tanjona io.
Amin’ny alalan’ny fanatsarana ny sakafo sy ny fampiroboroboana fambolena no fepetra voalohany ho raisina amin’izany.
Ny 76 % ny mponina eto Madagasikara dia tsy mahatratra ny kaloria farafahakeliny, 2.133, ny sakafo hohanin’izy ireo. Ny zaza amam-behivavy no tena iharan’izany. Manginy fotsiny ny tranga any amin’ny faritra Atsimo
Mba hanafoanana io antontan’isa io, nandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny nisy Ministeran’ny ekonomia sy ny planina.Nisy ny atrika asa nikaon-doha ho hametrahana ny teti-panorina iadiana ny hanoanana na “stratejika nasionaly ho foana ny hanoanana”.
Previous PostMINISTERAN’NY RANO: Fanamby ny fisitrahan’ny daholobe ny EAH. Next PostFMI MALAGASY: Iray volana monja, hanana fahefa-mividy ny vahoaka Malagasy.